उडन्ता पुत्र: बाइबल को रहस्य [पत्ता लगाइयो]?
दृष्टान्तको उडन्ता छोरा मा छ बाइबल सुसमाचारको पुस्तकमा अध्याय १ verses पद ११ देखि 15२ सम्म लूकाको अनुसार छ।
त्यहाँ एक बुबाको कथा भनिएको छ जसको दुई बच्चा छन् जसबाट बच्चाले निर्णय गर्ने निर्णय गर्छ कि उसको उत्तराधिकारसँग के मिल्दछ।
यो जवान मानिस संसारमा जान्छ, र केहि साथीहरुको संगै, त्यो सबै पैसा खर्च गर्दछ।
जब ऊसँग केहि बाँकी छैन, उसको साथीहरूले उसलाई एक्लै छोडिदिन्छन्, उनी के गर्ने भनेर जान्दैनन्।
उसले रोजगारी खोज्ने निर्णय गर्दछ र एक दिन मजदुरको रूपमा काममा लिईन्छ जब उसले आफूले गरेको गल्ती महसुस गर्छ र आफ्नो बुबाको घरमा फर्कने महत्वपूर्ण निर्णय गर्छ।
आफ्नो बुबाको अगाडि आइपुग्दा जवान मान्छेलाई हर्षले स्वागत गरिन्छ, उसले भोज मनाउने निर्णय गर्छ किनकि उसको छोरो फर्केर आएको थियो। त्यस युवकको लुगा बदलियो र उसलाई एउटा नयाँ औंठी दिइयो।
त्यो जवान मानिसलाई माफ गरियो र उही दिन उनीहरूले उनको सम्मानमा ठूलो भोज मनाए।
यो पवित्र धर्मशास्त्रमा भेटिने सबैभन्दा लोकप्रिय कथाहरूमध्ये एक हो र यसले हामीलाई पश्चाताप र बुबाले हामीलाई माया गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण शिक्षाहरू दिन्छ।
1 सबै गुमाए पछि पश्चात्ताप
2 आफ्नो छोराको फिर्ती मनाउने बुबा
3 उडन्ता छोरा: मनोभावले फरक पार्छ ...
3.1 बुबाको मनोवृत्ति:
3.2 उडन्ता छोराको दृष्टिकोण:
3.3 जेठो दाइको मनोवृत्ति:
सबै गुमाए पछि पश्चात्ताप
उडन्ता छोराको पश्चातापको बारेमा सोच्न हल्का रूपमा गर्न सकिदैन किनकि केही महत्त्वपूर्ण पक्षहरूमा विचार गर्नुपर्दछ।
धेरै चोटि हामी यो सोच्दछौं कि यो एक कपटी बच्चाको बारेमा हो जसले उसको सबै पैसा मागे र सबै खर्च गरिसकेपछि फर्कने निर्णय गर्छ, तर भित्र हो कथा धेरै गहिरो छ यो र यसले हामीलाई पाठहरू छोड्छ जुन हाम्रो जीवनको लागि धेरै लाभदायक हुन सक्दछ।
सर्वप्रथम हामीले यो बुझ्नुपर्दछ कि हामी सबै पापीहरू हौं, कि जन्ममा हामीले पापको त्यो जरामा ल्याउँदैछौं र जब हामी बढ्दै जान्छौं, त्यहाँ हामीले धेरै कुरा गर्छौं जसले हामीलाई स्वर्गको बुबाबाट टाढा लैजान्छ।
उडन्ता छोरा जस्तै, परमेश्वरले हामीलाई जीवन दिनुहुन्छ र हामीले यसलाई पूर्ण रूपमा बाँच्नको लागि सबै चीज दिनुहुन्छ र हामी यसलाई अरू चीजहरू गर्न समर्पण गरेर खेर फाल्छौं र, सबैभन्दा खराब अवस्थामा, दुष्कर्म गरेर, हाम्रा छिमेकीहरू र अरूलाई हानी गर्दछ। ब्यवहार जुन हाम्रो लागि राम्रो छैन।
जब हामी पश्चात्ताप गर्छौं तब पापको जीवन परिवर्तन हुन्छ, जब हामी आफ्नो सोच बदल्न सक्दछौं र राम्रो जीवन बिताउने निर्णय गर्न सक्छौं।
यसको मतलब यो होइन कि हामी सिद्ध हुनेछौं, तर हामी पालन गर्न प्रयास गर्नेछौं परमेश्वरको इच्छा संग र हामी पिताको नजिक बाँचिरहेका छौं.
उडन्ते छोराले जस्तै हामीले पनि आफ्नो जीवन खराब चीजहरूमा व्यतीत गरेका छौं र अब हाम्रा पिताकहाँ फर्कने, हाम्रा पापहरूका लागि पश्चात्ताप गर्ने समय आएको छ।
यो एउटा शिक्षा हो जुन यो दृष्टान्तले हामीलाई छोड्छ; यदि हामी पश्चात्ताप गर्छौं भने, हामी पिताको क्षमा पाउन सक्छौं।
आफ्नो छोराको फिर्ती मनाउने बुबा
यो एउटा चाखलाग्दो शिक्षा हो किनभने धेरै चोटि हामी सोच्दछौं कि हामीले जे गरेका छौं त्यो परमेश्वरबाट क्षमा पाउन योग्यको छैन।
यद्यपि, हामी सबै पिताको सामु जान र हाम्रा पापहरूको क्षमाको लागि अनुरोध गर्न सक्छौं।
परमेश्वरको वचनले धेरै पदहरूमा जोड दिएका छन्, जब पापीले स्वर्गमा पश्चाताप गर्दछ, त्यहाँ एउटा भोज हुन्छ, जुन पिताले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ जुन हामीले गरेको कुनै पनि नराम्रो भन्दा ठूलो छ।
महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो कि हामीले आफूलाई साँचो पश्चाताप गर्ने पिताको सामु प्रस्तुत गर्नु।
उडन्ता छोराले गरे जस्तै उनले महसुस गरे कि उनको बुबाको घरमा उसलाई आफूलाई चाहिएको सबै थियो र यो पैसाको बारेमा होइन तर सुरक्षित महसुस गर्नु, माया गर्नु र सबै भन्दा माथि स्वीकार्य छ।
हामी सबैले जीवनको कुनै न कुनै मोडमा त्यो जवान मानिस जस्तो महसुस गरेका थियौं, हामीलाई त्यस्तो लाग्दैन हामीलाई माया गर्ने र खुल्ला हातले हामीलाई ग्रहण गर्ने कोही छैन र यस शिक्षामा हामी देख्न सक्छौं स्वर्गमा बस्नुहुने बुबाले हामीलाई यति धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ कि यसले पापको भीडलाई छोप्दछ।
साँचो पश्चातापले हामीलाई परमेश्वरसँग नजिक ल्याउँछ।
हाम्रा गल्तीहरू चिन्न र हाम्रा पापहरूको लागि क्षमा माग्न सक्षम हुनु महत्त्वपूर्ण छ तर अधिक मूल्यवान छ जब हामी साँचो माफी चाहन्छौं।
स्वर्गीय बुबाले सृष्टिको सुरूदेखि नै मानवताप्रति प्रेम देखाउनुभएको छ हामी हरेक बिहान आँखा खोल्दा हामी कति प्रेम गर्छौं भनेर देख्न सक्छौं ...
जब हामी सास फेर्छौं जब हामी केही गतिविधि गर्न सक्दछौं, जब हामी प्रकृति देख्छौं, यसले आफ्ना बुबाहरूलाई आफ्नो बुबाप्रतिको प्रेम देखाउँदछ र केवल साँचो पश्चाताप गर्नेहरूले आफूलाई परमेश्वरको सन्तान भनेर चिनिन्छन्, जबकि हामी यो गर्दैनौं, हामी केवल परमेश्वरको सृष्टि हौं।
उडन्ता छोरा: मनोभावले फरक पार्छ ...
यस कथामा हामी तीन धारणा देख्छौं जुन हामीले हामीले ध्यानमा राख्नुपर्दछ र हामीले गर्न सकिने सम्पूर्ण शिक्षालाई निकाल्न सक्षम हुनको लागि हामी उनीहरूलाई एक पछि अर्को विस्तृत रूपमा विस्तार गर्ने छौं।
यो एक्लो बुबा हो जसले आफ्ना दुई बच्चाहरूलाई हुर्काए प्रत्येकको लागि समान फाइदाहरू। राम्रो स्थिति भएको परिवार जसमा पहिले नै दुई बच्चाहरूको चरणमा उनीहरू आफैले निर्णय लिन सक्छन्।
दुई जना मध्ये कान्छो छोरा आफ्नो बाबुको कुरा सुनेर आफ्नो बुबाको कुरा सुन्न सजिलो भएन किनभने उनी आफ्नो सम्पत्तीको आनन्द लिन चाहन्थे।
बुबा बुझेका थिए र शान्त थिए, उनलाई थाहा थियो कि कसरी छोराको अनुरोधलाई स्वीकार्ने र यसलाई चोट पुर्‍याउने पनी सम्मान गर्ने। ऊ केवल हो कि उसले केहि पनि नलिई पूर्ण मा माने के हो वितरित।
उडन्ता छोराको दृष्टिकोण:
सुरुमा हामी गर्वको छोरो देख्छौं, जसले आफ्नै फाइदा मात्र खोज्छ। कि उसले आफ्नो बुबाको भावनाको ख्याल राख्दैन जस्तो देखिन्छ र ऊ आफैंलाई केही नदेखीकन छोडेर गएका साथीहरूको साथमा जीवनको आनन्द उठाउनकोलागि निर्णय गर्छ।
उडन्ता छोरा विद्रोही थियो तर त्यसपछि हामी एउटा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन देख्छौं र त्यो हो जब पश्चात्ताप भयो। मनोवृत्ति परिवर्तन, बुबा को लागी माफी मागे, र कृतज्ञ थियो।
जेठो दाइको मनोवृत्ति:
आफ्नो कान्छो भाइले आफ्नो परिवारमा गरेको क्षति देख्न पक्कै सजिलो भएन।
उनले आफ्नो सम्पत्ति पनि पाए, जुन उनको दाज्यूलाई दिइन्थ्यो। यद्यपि उनले बस्ने निर्णय गरे। उसको भाइलाई के भइरहेको थियो त्यो देखेर उसको मनोभाव कष्टप्रद भयो।
उनले हर्ष बिना उत्तराधिकारी पनि देखाए, भावशून्यताको पनि। जेठो छोरा राम्रो छोरा थियो, तर ऊ एक असल भाइ थिएन।
यी तीन दृष्टिकोणले हामीलाई धेरै कुरा सिकाउँछ। यदि हामी अभिभावकहरू हौं जुन हामी चाहन्छौं भने हाम्रा बच्चाहरूलाई खुशीले हेर्न चाहन्छन् र कहिलेकाँही, हामीले होईन भन्न आवश्यक छ।
उडन्ता बच्चाहरूको रूपमा, हाम्रो मनोवृत्ति उत्तम नभए पनि, हामी सधैं बुबाकहाँ फर्केर फर्कन सक्छौं। जेठा भाईको रूपमा हामी पनि राम्रो दाजुभाइ भएकोमा चिन्ता लिनुपर्दछ।
हामीलाई हाम्रो छिमेकीलाई दयाले भर्नुहोस् र सबै समयमा बढी समानुभूति देखाउनुहोस्।
के तपाईंलाई उडन्ते छोराको बारेमा लेख मनपर्‍यो?
ली पनि छ ख्रीष्टको रगतको प्रार्थना र यो पवित्र त्रिएकमा प्रार्थना.
व्हाट्सएप समूह भेनेजुएला